တို႔ေဆးဆိုတာဘာလဲ ? - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစံု / တို႔ေဆးဆိုတာဘာလဲ ?
Apann Pyay 11:43 PM ဗဟုသုတအစံု Edit
၂။ Burundanga ဆိုတဲ့အရာဟာ တို႔ေဆးမ်ားလား။ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ အဘယ္ကဲ့သို႔ေသာ အရာမ်ဳိးပါလဲ။ ေဆးဝါး ေရာင္းခ်တဲ့ဆိုင္ေတြမ်ား ေမးျမန္းဝယ္လို႔ရပါသလား။ ရခဲ့ရင္ အဘယ္ကဲ့သို႔ အသံုးျပဳရပါသလဲ။ လူကိုအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစပါသလား။
တြဲျပီးတင္ထားတဲ့ပံုကိုသံုးျပီး သတင္းေရးၾကတာေတြဖတ္ရတယ္။ ပံုကိုအသားေပးထားျပီး အေရးအသားမျပည့္စံုပါ။ လိပ္စာကပ္မွာ ဒီလိုေဆးကိုသုတ္ျပီး မေကာင္းတာၾကံစည္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းမ်ိဳးေတြလဲ (ဂူဂယ္လ္) မွာေတြ႔ပါမယ္။ ေရးထားတာေတြက ပညာေပးနဲ႔မတူၾကပါ။
၂၂-၅-၂ဝ၁၃ ေန႔ကသတင္းတပုဒ္မွာ Burndanga business card ကပ္ျပားနဲ႔ ေဆးတို႔တဲ့သတင္းဟာ အစစ္လား၊ အတုလားလို႔ ေခါင္းစဥ္ေပးထားပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ ဓါတ္ဆီဆိုင္တခုမွာ လိပ္စာကပ္ေပးျပီး၊ ေနာက္ေယာင္ခံ အလိုက္ခံရတဲ့သတင္းကို ကိုးကားထားပါတယ္။ အဲဒီကပ္မွာ Burndanga ေဆးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲလိုနည္းနဲ႔ေတာ့ လူတေယာက္ကို ေမ့သြားေအာင္မလုပ္ႏိုင္ပါ။ ေဆးပါးစပ္ကေနဝင္မွသာ ဒုကၡေရာက္ပါတယ္။ အေအးထဲ၊ ဘီယာထဲ ခပ္ထားတာေသာက္ မိရင္ေတာ့ ဖုတ္ဝင္သလိုျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အဲလိုမ်ိဳး နယူးေယာက္မွာ ျဖစ္ဖူးေသးတယ္။ ATM ကေန ပိုက္ဆံအကုန္ထုတ္ယူသြားတာ ခံလိုက္ရပါတယ္။
(ဘူရူဒန္းဂါ) ေဆးဟာ Brugmansia plant အပင္ကေနရတယ္။ Angel's Trumpet ပဒိုင္းပင္ဟာလဲ ရုကၡေဗဒအလိုအရ Brugmansia genus အႏြယ္ဝင္ျဖစ္တယ္။ ပဒိုင္းသီးစားရင္ ရူးတာကို မစားဘူးေပမဲ့ ၾကားဘူးၾကမယ္။ Alkaloids အမ်ိဳးအစား Scopolomine, Hyoscyamine နဲ႔ Atropine ေတြက အဲဒီအပင္မ်ိဳးေတြကေနရတယ္။ ဓါတ္ခြဲခန္းမွာလဲ ထုတ္တယ္။ Anticholinergic medicine အေနနဲ႔ ေရာဂါေတြကုစားဘို႔ အမ်ားၾကီးသံုးပါတယ္။ မွတ္ဥာဏ္ကို သက္ေရာက္ေစျပီး၊ ခုခံမႈမလုပ္ႏိုင္တဲ့အေျခအေနကို ျဖစ္ေစတာေၾကာင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မေကာင္းတာအတြက္ သံုးၾကတယ္။
Atropine ကို အအန္ေပ်ာက္ေဆး၊ ေမ့ေဆးနဲ႔တြဲေပးတဲ့ ထိုးေဆးအေနနဲ႔ သံုးတယ္။ ၁-၁၂ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးေတြအတြက္6mcg/kg (maximum 0.3 mg/dose) IV, IM or SC every6to 8 hours ေပးရတယ္။ နာတာကိုက္တာ၊ အေရျပားနာ၊ က်ားအေၾကာနာ၊ အဆစ္နာ၊ ေလးဘက္နာ၊ ေခါင္းကိုက္ နဲ႔ ပိုးဝင္တာေတြမွာလဲ သံုးတယ္။ ခါးတာ-ေခါင္းကိုက္ေဆးကပ္ခြါ လုပ္တယ္။ Mydriatic and cycloplegic မ်က္စဥ္းေတြမွာသံုးတယ္။ ေဒါင့္က်ဥ္းေရတိမ္၊ ပန္းနာ၊ မ်က္ခြံေအာက္က်တာ၊ အစာလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ေနတာေတြမွာ လံုးဝမသံုးရဘူး။ ကားမူးလို႔ ပ်ိဳ႕ခ်င္၊ အန္ခ်င္တာအတြက္ Transderm Scop ကပ္ခြါေဆးသံုးရတယ္။ 1.5 mg ခရီးမသြားခင္ ၄ နာရီၾကိဳကပ္ပါ။ ၃ ရက္အထိခံတယ္။ ဗိုက္ (အူ) ရစ္နာတာအတြက္လဲ သံုးတယ္။ ႏွာရည္၊ ခြ်ဲ၊ သလိပ္၊ အစာေျခရည္ စတာေတြ အထြက္သက္သာေအာင္လဲ သံုးတယ္။ (ပါကင္ဆိုနဇင္) ေရာဂါ အတြက္လဲသံုးတယ္။ အရင္တံုးက ဘိန္းျဖဴနဲ႔ ကိုကိန္း ေဆးျဖတ္တာမွာသံုးတယ္။ အိပ္ေဆးအျဖစ္လဲ ရတယ္။ ဘိန္းပါတဲ့ အနာသက္သာေဆးနဲ႔ေရာျပီး စိတ္ျငိမ္ေဆးအေနနဲ႔သံုးတယ္။ ဥပမာ (ေမာဖိန္း)။ သားဖြါးခန္းမွာလဲ ျငိမ္ေဆးအျဖစ္ သံုးၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မသံုးသင့္ဘူး။ အထဲကကေလးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္တယ္။
ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳးေတြကေတာ့ သူငယ္အိမ္က်ယ္သြားလို႔ မ်က္စိေဝဝါးေနမယ္၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္မယ္၊ အာေခါင္ေျခာက္မယ္၊ ေခြ်းထြက္နည္းမယ္။ ေရငတ္မယ္။ ဝမ္းခ်ဳပ္မယ္။ ဆီးသြားရခက္မယ္။ မ်ားသြားရင္၊ ကိုယ္ပူမယ္။ ဂနာမျငိမ္ျဖစ္မယ္။ စိတ္ရႈတ္ေထြးေစမယ္၊ ေဒါသၾကီးေစမယ္၊ စကားေျပာတာ လံုးေထြးေနမယ္၊ သူမ်ားမျမင္-မၾကားတာေတြ ျမင္ရ-ၾကားရမယ္၊ ေတာင္စဥ္ေရမရျဖစ္မယ္၊ အမွားေတြလုပ္ေနမယ္။ Diazepam လိုဘဲ မွတ္ဥာဏ္ ေလ်ာ့နည္းေစတယ္။
(ကိုလမ္ဘီယာ) ႏိုင္ငံမွာ လမ္းေဘးေဆးဝါးအျဖစ္ သံုးၾကတယ္။ အမံႈ႔ကိုသံုးတယ္။ ပံုမွန္စိတ္ေတြ ေပ်ာက္သြားေစမယ္။ ေသခ်င္လဲ ေသသြားမယ္။ စုန္းေမွာ္ အတတ္ပညာမွာလဲသံုးတယ္လို႔ သိရတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ Zombie drug လို႔လဲ နာမည္ရတယ္။ ဖုတ္ေကာင္ေတြလိုျဖစ္ေစလို႔ပါ။
ခ်ိဳခ်ဥ္၊ စီးကရက္၊ ခ်ဴးယင္းဂမ္း၊ ဘီယာစတာေတြထဲမွာခပ္ျပီး မေတာ္မတရားအလုပ္ခံရႏိုင္တယ္။ ခံရသူေတြကို ေဆးရံုတင္ကုသရတယ္။ စိတ္မူမမွန္ျဖစ္ေနမယ္။ ကိုယ္ပူမယ္။ ေခြ်းမထြက္ဘူး။ Date rape drug ေခၚတဲ့ ပါတီသံုးေဆး၊ ရက္ခ်ိန္နဲ႔မုဒိန္းက်င့္တဲ့ေဆးထက္ ၄ ဆျပင္းတယ္။ နာဇီမွာ Angel of death ေသမင္းတမန္လို႔ နာမည္ရထားတဲ့ Joseph Mengele ကလဲ စမ္းသပ္မႈေတြလုပ္ခဲ့တယ္။ CIA နဲ႔ Czechoslovak communist secret police ခ်က္ကြန္ျမဴနစ္ လႈိ႕ဝွက္ပုလိပ္ေတြက သံုးတယ္။ ျမန္မာစစ္ေထာက္လွမ္းေရးလဲ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္းမွာ သံုးတယ္လို႔ သံသယရွိၾကတယ္။
၁။ ဆရာ တို့ဆေးဆိုတာလဲ သိချင်ပါတယ်။ ဗန်ကောက်မှာ မြန်မာတွေကို အဲလိုလုပ်ပြီး ဒေါ်လာတွေ ယူသွားတယ်လို့ သတင်းကြားရလို့ပါ။
၂။ Burundanga ဆိုတဲ့အရာဟာ တို့ဆေးများလား။ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် အဘယ်ကဲ့သို့သော အရာမျိုးပါလဲ။ ဆေးဝါး ရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေများ မေးမြန်းဝယ်လို့ရပါသလား။ ရခဲ့ရင် အဘယ်ကဲ့သို့ အသုံးပြုရပါသလဲ။ လူကိုအန္တရာယ် ဖြစ်စေပါသလား။
တွဲပြီးတင်ထားတဲ့ပုံကိုသုံးပြီး သတင်းရေးကြတာတွေဖတ်ရတယ်။ ပုံကိုအသားပေးထားပြီး အရေးအသားမပြည့်စုံပါ။ လိပ်စာကပ်မှာ ဒီလိုဆေးကိုသုတ်ပြီး မကောင်းတာကြံစည်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းမျိုးတွေလဲ (ဂူဂယ်လ်) မှာတွေ့ပါမယ်။ ရေးထားတာတွေက ပညာပေးနဲ့မတူကြပါ။
၂၂-၅-၂ဝ၁၃ နေ့ကသတင်းတပုဒ်မှာ Burndanga business card ကပ်ပြားနဲ့ ဆေးတို့တဲ့သတင်းဟာ အစစ်လား၊ အတုလားလို့ ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်။ အမျိုးသမီးတယောက် ဓါတ်ဆီဆိုင်တခုမှာ လိပ်စာကပ်ပေးပြီး၊ နောက်ယောင်ခံ အလိုက်ခံရတဲ့သတင်းကို ကိုးကားထားပါတယ်။ အဲဒီကပ်မှာ Burndanga ဆေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲလိုနည်းနဲ့တော့ လူတယောက်ကို မေ့သွားအောင်မလုပ်နိုင်ပါ။ ဆေးပါးစပ်ကနေဝင်မှသာ ဒုက္ခရောက်ပါတယ်။ အအေးထဲ၊ ဘီယာထဲ ခပ်ထားတာသောက် မိရင်တော့ ဖုတ်ဝင်သလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲလိုမျိုး နယူးယောက်မှာ ဖြစ်ဖူးသေးတယ်။ ATM ကနေ ပိုက်ဆံအကုန်ထုတ်ယူသွားတာ ခံလိုက်ရပါတယ်။
(ဘူရူဒန်းဂါ) ဆေးဟာ Brugmansia plant အပင်ကနေရတယ်။ Angel's Trumpet ပဒိုင်းပင်ဟာလဲ ရုက္ခဗေဒအလိုအရ Brugmansia genus အနွယ်ဝင်ဖြစ်တယ်။ ပဒိုင်းသီးစားရင် ရူးတာကို မစားဘူးပေမဲ့ ကြားဘူးကြမယ်။ Alkaloids အမျိုးအစား Scopolomine, Hyoscyamine နဲ့ Atropine တွေက အဲဒီအပင်မျိုးတွေကနေရတယ်။ ဓါတ်ခွဲခန်းမှာလဲ ထုတ်တယ်။ Anticholinergic medicine အနေနဲ့ ရောဂါတွေကုစားဘို့ အများကြီးသုံးပါတယ်။ မှတ်ဉာဏ်ကို သက်ရောက်စေပြီး၊ ခုခံမှုမလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကို ဖြစ်စေတာကြောင့် ရည်ရွယ်ချက်မကောင်းတာအတွက် သုံးကြတယ်။
ဆေးဝါးဗေဒအလိုအရ Scopolamine ဟာ Anticholinergic alkaloid ဖြစ်တယ်။ Hyoscine လို့လဲ ခေါ်တယ်။ မျက်စိ သူငယ်အိမ်ကို ကျယ်စေတယ်။ အစာအိမ်နဲ့ အူတွေအလုပ်နှေးစေတယ်။ ထွက်စရာအရည်တွေ နည်းစေတယ်။ စားဆေး၊ ငုံဆေး၊ ထိုးဆေး၊ အရေပြား ကပ်ခွါအနေနဲ့ ရတယ်။
Atropine ကို အအန်ပျောက်ဆေး၊ မေ့ဆေးနဲ့တွဲပေးတဲ့ ထိုးဆေးအနေနဲ့ သုံးတယ်။ ၁-၁၂ နှစ်အရွယ် ကလေးတွေအတွက်6mcg/kg (maximum 0.3 mg/dose) IV, IM or SC every6to 8 hours ပေးရတယ်။ နာတာကိုက်တာ၊ အရေပြားနာ၊ ကျားအကြောနာ၊ အဆစ်နာ၊ လေးဘက်နာ၊ ခေါင်းကိုက် နဲ့ ပိုးဝင်တာတွေမှာလဲ သုံးတယ်။ ခါးတာ-ခေါင်းကိုက်ဆေးကပ်ခွါ လုပ်တယ်။ Mydriatic and cycloplegic မျက်စဉ်းတွေမှာသုံးတယ်။ ဒေါင့်ကျဉ်းရေတိမ်၊ ပန်းနာ၊ မျက်ခွံအောက်ကျတာ၊ အစာလမ်းကြောင်း ပိတ်နေတာတွေမှာ လုံးဝမသုံးရဘူး။ ကားမူးလို့ ပျို့ချင်၊ အန်ချင်တာအတွက် Transderm Scop ကပ်ခွါဆေးသုံးရတယ်။ 1.5 mg ခရီးမသွားခင် ၄ နာရီကြိုကပ်ပါ။ ၃ ရက်အထိခံတယ်။ ဗိုက် (အူ) ရစ်နာတာအတွက်လဲ သုံးတယ်။ နှာရည်၊ ချွဲ၊ သလိပ်၊ အစာခြေရည် စတာတွေ အထွက်သက်သာအောင်လဲ သုံးတယ်။ (ပါကင်ဆိုနဇင်) ရောဂါ အတွက်လဲသုံးတယ်။ အရင်တုံးက ဘိန်းဖြူနဲ့ ကိုကိန်း ဆေးဖြတ်တာမှာသုံးတယ်။ အိပ်ဆေးအဖြစ်လဲ ရတယ်။ ဘိန်းပါတဲ့ အနာသက်သာဆေးနဲ့ရောပြီး စိတ်ငြိမ်ဆေးအနေနဲ့သုံးတယ်။ ဥပမာ (မောဖိန်း)။ သားဖွါးခန်းမှာလဲ ငြိမ်ဆေးအဖြစ် သုံးကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မသုံးသင့်ဘူး။ အထဲကကလေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်။
ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေကတော့ သူငယ်အိမ်ကျယ်သွားလို့ မျက်စိဝေဝါးနေမယ်၊ နှလုံးခုန်မြန်မယ်၊ အာခေါင်ခြောက်မယ်၊ ချွေးထွက်နည်းမယ်။ ရေငတ်မယ်။ ဝမ်းချုပ်မယ်။ ဆီးသွားရခက်မယ်။ များသွားရင်၊ ကိုယ်ပူမယ်။ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်မယ်။ စိတ်ရှုတ်ထွေးစေမယ်၊ ဒေါသကြီးစေမယ်၊ စကားပြောတာ လုံးထွေးနေမယ်၊ သူများမမြင်-မကြားတာတွေ မြင်ရ-ကြားရမယ်၊ တောင်စဉ်ရေမရဖြစ်မယ်၊ အမှားတွေလုပ်နေမယ်။ Diazepam လိုဘဲ မှတ်ဉာဏ် လျော့နည်းစေတယ်။
တောင်အမေရိကားမှာ Ritualistic hallucinogen ဆိုပြီး ကွယ်လွန်သွားသူတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်လုပ်ဘို့ဆိုပြီး သုံးတယ်။ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရဖြစ်တဲ့ ကလေးတွေ သွားလေသူတွေ ပူးနေသလားဆိုပြီး ဆေးကုဘို့အတွက်လဲ သုံးသေးတယ်။ အရှင်သခင်သေတဲ့အခါ ဇနီးတွေ ကျွန်တွေကို အရှင်လတ်လတ် မြေမမြှုတ်ခင် ခေါင်ရည်၊ ဆေးရွက်တွေနဲ့ရောပြီး တိုက်တယ်။ အစေ့နဲ့ အရွက်တွေက ပိုပြီးအဆိပ်ပြင်းတယ်။
၉-၇-၂ဝ၁ဝ နေ့သတင်းမှာ အမေရိကား၊ တောင်ကယ်ရိုလိုင်းနားမယ် လူငယ်တွေ ပန်းပွင့်ကို ပြုတ်-ကြို သောက်ရာကနေ ဆေးရုံတက်ကြရတယ်လို့ပါတယ်။ အဲလိုသောက်တော့ အစမှာ (ဟယ်လူစီနေးရှင်း) ခေါ်တဲ့ သူများ မမြင်တာတွေကိုမြင်၊ သူများ မကြားတာတွေကို နားထဲမှာကြားဆိုတဲ့ မူမှန်မဟုတ်တဲ့ ခံစားမှုတွေ ဖြစ်စေတယ်။ ဒါ့ပြင် နှလုံးခုန် တအား မြန်လာပြီး၊ သေလောက်အောင် ဆိုးတဲ့ နှလုံးခုန် မမှန်တာနဲ့ ပန်းနာထသလို အဆုပ်လေပြွန်တွေ ကျဉ်းတာတွေ ဖြစ်လာမယ်။ ရောဂါဗေဒ ဂျာနယ်မှာ ဒီဆေးရဲ့ (ဟယ်လူစီနေးရှင်း) သတ္တိဟာ စိတ်သာယာဘို့ထက် ကြောက်မက်ဖွယ် ဖြစ်စေတယ်လို့ ရေးထားတယ်။ အနည်းဆုံး ခဏတာ ရူးသွပ်စေတယ်။
ဒီဆေးမျိုးနဲ့ဖျော်စပ်ထားတဲ့ Tonga ကိုသောက်တဲ့ လူတယောက်ကို (ဆွစ်) သဘာဝသိပ္ပံပညာရှင် Johann von Tschudi ကနေ စေ့စေ့ငုငု လေ့လာတယ်။ ဒီလူဟာ ဘာမှန်းမှ မသိသလို မြေကြီးကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။ ပါးစပ်ကို စိနေအောင် ပိတ်ထားတယ်။ နှာခေါင်းက ပြားချပ်နေတယ်။ နဖူးမှာ ချွေးစီးတွေ ပျံလာတယ်။ လူသေလိုဘဲ အေးစက်နေတယ်။ လည်ပင်းသွေးကြောတွေ ထောင်နေတယ်။ အသက်ရှူတာလဲ ရင်ပတ်က ခပ်နှေးနှေး ဖေါင်းလိုက်-ပြားလိုက်နဲ့ တစီစီမည်နေတယ်။ လက်နှစ်ဖက်က တင်းပြီး ဘေးချထားတယ်။ မျက်လုံးက မျက်ရည်တွေ အများကြီး စီးကျလာတယ်။ နှုတ်ခမ်းက ရွစိရွစိ ဖြစ်လာတယ်။ အသက်ရှူမြန်လာတယ်။ ဒီလိုဖြစ်နေတာ ၁၅ မိနစ်ကြာတယ်။ ဒိနောက် အဲလိုဖြစ်တာတွေက ပြင်းထံလာတယ်။ မျက်လုံးတွေ နီရဲပြီး ခြောက်လာ၊ လည်လာတယ်။ မျက်နှာ ကြွက်သားတွေ တွန့်လှုတ်လာတယ်။ တဝက်တပျက် ပွင့်နေတဲ့ ပါးစပ်က အမြှုတ်ဖြူတွေထွက်လာတယ်။ လည်ပင်းကြောတွေ လှုတ်တာမြန်လွန်းလို့ ရေလို့တောင်မရဘူး။ အသက်ရှူတာတိုတောင်းပြီး မြန်လာတယ်။ ရင်ပတ်လှုတ်နေတယ် မထင်ရဘူး။ မြင်တော့နေရတယ်။ ချွေးစီးတွေ တကိုယ်လုံး စိုရွဲလာတယ်။ တက်နေသလိုဖြစ်လာတယ်။ ငြိမ်နေလိုက် အသံကျယ်ကြီးနဲ့ အော်လိုက်။ ဘာသံတွေလဲ ခွဲလို့မရဘူး။
(ကိုလမ်ဘီယာ) နိုင်ငံမှာ လမ်းဘေးဆေးဝါးအဖြစ် သုံးကြတယ်။ အမှုံ့ကိုသုံးတယ်။ ပုံမှန်စိတ်တွေ ပျောက်သွားစေမယ်။ သေချင်လဲ သေသွားမယ်။ စုန်းမှော် အတတ်ပညာမှာလဲသုံးတယ်လို့ သိရတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Zombie drug လို့လဲ နာမည်ရတယ်။ ဖုတ်ကောင်တွေလိုဖြစ်စေလို့ပါ။
ချိုချဉ်၊ စီးကရက်၊ ချူးယင်းဂမ်း၊ ဘီယာစတာတွေထဲမှာခပ်ပြီး မတော်မတရားအလုပ်ခံရနိုင်တယ်။ ခံရသူတွေကို ဆေးရုံတင်ကုသရတယ်။ စိတ်မူမမှန်ဖြစ်နေမယ်။ ကိုယ်ပူမယ်။ ချွေးမထွက်ဘူး။ Date rape drug ခေါ်တဲ့ ပါတီသုံးဆေး၊ ရက်ချိန်နဲ့မုဒိန်းကျင့်တဲ့ဆေးထက် ၄ ဆပြင်းတယ်။ နာဇီမှာ Angel of death သေမင်းတမန်လို့ နာမည်ရထားတဲ့ Joseph Mengele ကလဲ စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ CIA နဲ့ Czechoslovak communist secret police ချက်ကွန်မြူနစ် လှို့ဝှက်ပုလိပ်တွေက သုံးတယ်။ မြန်မာစစ်ထောက်လှမ်းရေးလဲ ဒီပဲယင်းအရေးအခင်းမှာ သုံးတယ်လို့ သံသယရှိကြတယ်။